ठुलो खुशीको खबर ! यी नेपाली युवाले इंग्लिस प्रिमियर लिग खेल्ने – Nepal Trending
ठुलो खुशीको खबर ! यी नेपाली युवाले इंग्लिस प्रिमियर लिग खेल्ने
एजेन्सी । लण्डनमा बस्दै आएका नेपाली मूलका किशोरले इंग्लिस प्रिमियर लिगमा आबद्ध भएका छन् । साउथ इस्ट लण्डनको प्लमस्टिड निवासी १५ वर्षीय जय प्रधान वाटफोर्ड फुटबल क्लबको अन्डर १६ टिमका लागि अनुबन्धन भएका हुन् ।
बिहीबार लण्डनको वाटफोर्डस्थित क्लबको ट्रेनिङ सेन्टरमा जय र क्लबबीच आउँदो सिजन (२०१९/२०) का लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । इंग्लिस प्रिमियिर लिग इंग्ल्याण्डको सबैभन्दा उपल्लो तहको फुटबल लिग हो ।
विश्व फुटबलकै प्रतिष्ठित यो लिग इंग्ल्याण्डका शीर्ष २० क्लबले मात्र खेल्छन् । यस सिजनमा प्रिमियिर लिगको एघारौं स्थानमा आउन सफल वाटफोर्ड क्लब एफए कपमा भने म्यानसिटीसँगै फाइनलमा छ ।
लण्डनमै जन्मिएका जय ४ वर्षको उमेरदेखि नै फुटबल खेल्न थालेका हुन् । यसअघि उनले टोटेनहाम र वेस्टह्याम जस्ता प्रिमियिर लिग क्लबमा पनि ट्रायलमा खेलिसकेका छन् । त्यस्तै उनले जुनियर रेड्सबाट नन लिग तहको केन्ट लिग पनि खेलेका थिए ।
‘एक्सपर्ट प्रधानमन्त्री कप’ क्रिकेट प्रतियोगिता हुँदै
राजधानी काठमाडौंमा यही १० जेठदेखि ‘एक्सपर्ट प्रधानमन्त्री कप’ क्रिकेट प्रतियोगिता हुने भएको छ । आयोजक राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र नेपालय इन्टरनेश्नलले शनिबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरि ‘एक्सपर्ट पीएम कप’ को तेश्रो संस्करण बारे जानकारी गराएका हुन् । १० जेठदेखि २५ गतेसम्म हुने प्रतियोगिताका खेलहरु र्कीतिपुर र मुलपानी खेल मैदानमा हुनेछ । प्रतियोगितामा ३ विभागीय सहित ७ वटा प्रदेशका १० टिमले सहभागीता जनाउने छन् ।
समूहका शीर्ष २–२ टिमले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउने छन् । प्रतियोगिताको कुल बजेट एक करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । परिषद्ले ८० लाख उपलब्ध गराउने छ भने बाँकी नेपालय इन्टरनेश्नलले प्रायोजकको सहयोगमा लगानी गर्ने भएको छ ।
प्रतियोगिताको विजेताले २० लाख र उपविजेताले १० लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउने छन् । त्यसैगरी, प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडीले एक थान मोटरसाईकल, उत्कृष्ट बलर र ब्याट्सम्यानले जनही ५० ÷५० हजार रुपैयाँ पाउने छन् । प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजकका रुपमा एक्सपर्ट एजुकेशन एण्ड भिसा सर्भिसेज रहेको छ ।